ဘယ်လို…လှူနေကြလဲ? ဒီနေ့ကစပြီး ..ဒီလိုပဲလှူ” (ပါချုပ်ဆရာတော်ကြီး) – ရွှေအလင်း
ဘယ်လို…လှူနေကြလဲ? ဒီနေ့ကစပြီး ..ဒီလိုပဲလှူ” (ပါချုပ်ဆရာတော်ကြီး)
မြတ်စွာ ဘုရားက လှူတဲ့အခါ ကိုယ်လှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်ကို စိတ်မရောက်စေနဲ့တဲ့သံဃာကိုပဲ စိတ်ရောက်အောင်ရည်စူးပြီးလှူတဲ့ဒါဖြင့် သံဃာကိုစိတ်ရောက်ရမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အိမ်မှာဆွမ်းလောင်းတယ်ဆိုပါစို့..ဆွမ်းလောင်းတယ်ဆိုတာ ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲကြွကြွ ဩော်ဒါဟာဘုရားလက်ထက်က သံဃာတွေရဲ့အဆက်အနွယ်အဲဒီ ဘုရားလက်ထက်ကသံဃာတွေထိအောင် အာရုံပြုပြီးတော့ လှူလိုက်တာ..သူ့ကိုမကြည့်ဘူး ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမကြည့်ဘူးသံဃာဆိုတဲ့အနေနဲ့ပဲကြည့်တာ ဒီလိုဖြစ်ရမယ်..အခုကြွလာတာဟာ အဲဒီသံဃာတွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ပဲလို့ပဲ စိတ်ထဲမှာထား..
သံဃာကိုလှူတာဟာ ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှူတာမဟုတ်ဘူး ဒီလိုဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့တော့ သံဃာလှူတာနဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်လှူတာနဲ့က အလွန်ကွာခြားတယ်..ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာက အကောင်းအဆိုးရှိနိုင်တယ်..ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမကြည့်ပါနဲ့ မျက်နှာကိုမကြည့်နဲ့..နော်..
ဆွမ်းလောင်း လို့ရှိရင်လည်း ဘုန်းကြီးမျက်နှာလည်းမကြည့်နဲ့ဘုန်းကြီးကလည်း ဒကာမမျက်နှာကို မကြည့်ရဘူး ကြည့်ရင်အပြစ်ပဲသူက..ဆိုလိုတာက မျက်နှာမကြည့်နဲ့ သံဃာဆိုတဲ့အနေနဲ့သာ သတ်မှတ်..အကျိုးရှိအောင်လို့ မြတ်စွာဘုရားက အဲ့လိုဟောတာ.. မြတ်စွာဘုရားက သံဃာကိုသာလှူဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်လောက်ထိအောင်ပြောထားတုန်းဆိုလို့ရှိရင်အေး နောက်ပိုင်းရောက်လာလို့ရှိရင် သာသနာပျက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာတဲ့သာသနာကွယ်ပြီဆိုတဲ့အချိန်ာ ရဟန်းတုရဟန်းယောင်(ဒုသီလပုဂ္ဂိုလ်)တွေ ပေါ်လာလိမ့်မယ်..သူတို့မှာ ဘုန်းကြီးဆိုတဲ့အထိမ်းအမှတ်ဟာဒီ လည်ပင်းကို သင်္ကန်းရောင်လေး ပတ်ထားတာလေးလောက်ပဲ ရှိတော့မယ်ကျန်တာက လူဝတ်လူစား အဲ့တာဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိနေပြီမြန်မာပြည်မှာလည်း ရှိရင်ရှိလာမှာပေါ့လေ..ဂျပန်မှာက ဂျပန်ဘုန်းကြီးလို့သာပြောရတာ အိမ်ထောင်လည်းပြုတယ်..ဘုန်းကြီးတို့ သီရိလင်္ကာမှာနေတုန်းကဒီJapanese Buddhismနဲ့ Zin Buddhismကို လာပြီးတော့သင်ပေးတဲ့ ဂျပန်ဆရာတစ်ဦးရှိတယ်..
ဂျပန် လူကြီးထင်နေတာ.. မဟုတ်ဘူး ..အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတဲ့..ဘုန်းကြီးကလည်း ဘိုကေနဲ့ နက်ကတိုင်နဲ့ ဘောင်းဘီနဲ့လာတာကိုး အဲတော့ ဘုန်းကြီးမှန်းမသိဘူး..ဘာသာရေးကိစ္စဆောင်ရွက်တဲ့အခါလေးမှာသာ ရဟန်းအသွင်ယူ အပေါ်ကပတ်လိုက်တာဒိပြင်အချိန်မှာ လူဝတ်ပဲသူက အဲ့လိုနေတာ..
အဲ့တော့ မြတ်စွာဘုရားက ဘာဟောထားတုန်းဆိုရင် နောင်အနာဂတ်မှာတဲ့သံဃိကဒါနဟာ ဘယ်လောက်ထိအကျိုးပေးနိုင်တုန်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီရဟန်းတု ရဟန်းယောင်တွေကို လှူတဲ့အခါမှာတောင်သံဃာအစစ်ကို ရည်မှန်းပြီးတော့လှူဒါန်းပါတယ်ဆိုရင် အဲဒီဒါနကုသိုလ်ဟာအတိုင်းအဆမဲ့အကျိုးရနိုင်တယ်လို့ ဒီလိုဟာထားတာ ‘ဒက္ခိဏဝိဘင်္ဂသုတ်’မှာ..အဲ့တော့ ကိုယ့်စိတ်က အဓိကကျတယ်ဒါကြောင့်မို့ အိမ်မှာဆွမ်းခံကြွလာတယ်ဆိုရင် သံဃာပဲသံဃာအနေနဲ့ပဲလှူ ဒါကို တိုက်တွန်းတာသံဃာဆိုတာ ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုရည်ညွှန်းတာမဟုတ်ဘူး
တစ်သာသနာလုံးမှာရှိတဲ့သံဃာတွေကို ရည်ညွှန်းလိုက်တာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးကို ရည်ညွှန်းတာနော်..အဲ့ဒီလို သံဃာဆိုတဲ့အမှတ်နဲ့ ရည်စူးပြီးတော့လှူလိုက်မယ်ဆိုရင် စိတ်ထဲမှာ ကြည်ညိုလိမ့်မယ်လှူတဲ့ဆွမ်းဟာ ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့အထိ ဘုရားလက်ထက်က အရိယာသံဃာတွေအထိ ရောက်သွားတယ်..ဒီကိုယ်တော်က ကိုယ်စားလှယ် သံဃာ့ကိုယ်စားလှယ်လို့ စိတ်ထဲမှာထား..နော်သံဃာ့ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့လှူလိုက်ရင် အဲဒါကို အာရုံပြုလိုက်ရတဲ့အခါမှာစိတ်တွေကြည်နူးလာမယ် အဲဒီလိုကြည်နူးတဲ့စိတ်နဲ့ သေဆုံးသွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းရာသုဂတိဘုံကိုရောက်နိုင်ပါတယ်လို့ မြတ်စွာဘုရားက ဟောတာနော်..ဒါက ဒါနနဲ့ပတ်သက်တဲ့ မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ မိန့်မှာချက်ပဲဖြစ်တယ်နော်..လှူဒါန်းရတဲ့အချိန်ကာလမှာ မိမိတို့ရဲ့စိတ်စေတနာဟာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ဖို့အတွက် မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သည်အကျိုးစီးပွားများပြားစေဖို့အတွက် အခုလိုဒါနနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားကို မိန့်ကြားတာပဲဖြစ်တယ်..ပါချုပ်ဆရာတော်ကြီး
တရားတော်အသံဖိုင်မှ ကောက်နုတ်ပူဇော်ထားခြင်းဖြစ်၍စာလုံးသတ်ပုံမှားယွင်းပါက သည်းခံခွင့်လွှတ်ပေးကြပါရန်🙏စေတနာမေတ္တာအရင်းခံဖြင့်💜
မွတျစှာဘုရားက လှူတဲ့အခါ ကိုယျလှူတဲ့ပုဂ်ဂိုလျအပျေါကို စိတျမရောကျစနေဲ့တဲ့သံဃာကိုပဲ စိတျရောကျအောငျရညျစူးပွီးလှူတဲ့ဒါဖွငျ့ သံဃာကိုစိတျရောကျရမယျဆိုရငျကိုယျ့အိမျမှာဆှမျးလောငျးတယျဆိုပါစို့..ဆှမျးလောငျးတယျဆိုတာ ဘယျပုဂ်ဂိုလျပဲကွှကွှ ဩျောဒါဟာဘုရားလကျထကျက သံဃာတှရေဲ့အဆကျအနှယျအဲဒီ ဘုရားလကျထကျကသံဃာတှထေိအောငျ အာရုံပွုပွီးတော့ လှူလိုကျတာ..သူ့ကိုမကွညျ့ဘူး ပုဂ်ဂိုလျကိုမကွညျ့ဘူးသံဃာဆိုတဲ့အနနေဲ့ပဲကွညျ့တာ ဒီလိုဖွဈရမယျ..အခုကွှလာတာဟာ အဲဒီသံဃာတှရေဲ့ကိုယျစားလှယျပဲလို့ပဲ စိတျထဲမှာထား..
သံဃာကိုလှူတာဟာ ဒီပုဂ်ဂိုလျကိုလှူတာမဟုတျဘူး ဒီလိုဆိုတာမွတျစှာဘုရားကအဲ့တော့ သံဃာလှူတာနဲ့ ပုဂ်ဂိုလျလှူတာနဲ့က အလှနျကှာခွားတယျ..ပုဂ်ဂိုလျဆိုတာက အကောငျးအဆိုးရှိနိုငျတယျ..ပုဂ်ဂိုလျကိုမကွညျ့ပါနဲ့ မကျြနှာကိုမကွညျ့နဲ့..နျော..
ဆှမျးလောငျးလို့ရှိရငျလညျး ဘုနျးကွီးမကျြနှာလညျးမကွညျ့နဲ့ဘုနျးကွီးကလညျး ဒကာမမကျြနှာကို မကွညျ့ရဘူး ကွညျ့ရငျအပွဈပဲသူက..ဆိုလိုတာက မကျြနှာမကွညျ့နဲ့ သံဃာဆိုတဲ့အနနေဲ့သာ သတျမှတျ..အကြိုးရှိအောငျလို့ မွတျစှာဘုရားက အဲ့လိုဟောတာ.. မွတျစှာဘုရားက သံဃာကိုသာလှူဆိုတဲ့နရောမှာဘယျလောကျထိအောငျပွောထားတုနျးဆိုလို့ရှိရငျအေး နောကျပိုငျးရောကျလာလို့ရှိရငျ သာသနာပကျြပွီဆိုတဲ့အခြိနျမှာတဲ့သာသနာကှယျပွီဆိုတဲ့အခြိနျာ ရဟနျးတုရဟနျးယောငျ(ဒုသီလပုဂ်ဂိုလျ)တှေ ပျေါလာလိမျ့မယျ..သူတို့မှာ ဘုနျးကွီးဆိုတဲ့အထိမျးအမှတျဟာဒီ လညျပငျးကို သင်ျကနျးရောငျလေး ပတျထားတာလေးလောကျပဲ ရှိတော့မယျကနျြတာက လူဝတျလူစား အဲ့တာဂပြနျနိုငျငံမှာရှိနပွေီမွနျမာပွညျမှာလညျး ရှိရငျရှိလာမှာပေါ့လေ..ဂပြနျမှာက ဂပြနျဘုနျးကွီးလို့သာပွောရတာ အိမျထောငျလညျးပွုတယျ..ဘုနျးကွီးတို့ သီရိလင်ျကာမှာနတေုနျးကဒီJapanese Buddhismနဲ့ Zin Buddhismကို လာပွီးတော့သငျပေးတဲ့ ဂပြနျဆရာတဈဦးရှိတယျ..
ဂပြနျလူကွီးထငျနတော.. မဟုတျဘူး ..အဲ့ဒါဘုနျးကွီးတဲ့..ဘုနျးကွီးကလညျး ဘိုကနေဲ့ နကျကတိုငျနဲ့ ဘောငျးဘီနဲ့လာတာကိုး အဲတော့ ဘုနျးကွီးမှနျးမသိဘူး..ဘာသာရေးကိစ်စဆောငျရှကျတဲ့အခါလေးမှာသာ ရဟနျးအသှငျယူ အပျေါကပတျလိုကျတာဒိပွငျအခြိနျမှာ လူဝတျပဲသူက အဲ့လိုနတော..
အဲ့တော့ မွတျစှာဘုရားက ဘာဟောထားတုနျးဆိုရငျ နောငျအနာဂတျမှာတဲ့သံဃိကဒါနဟာ ဘယျလောကျထိအကြိုးပေးနိုငျတုနျးဆိုလို့ရှိရငျဒီရဟနျးတု ရဟနျးယောငျတှကေို လှူတဲ့အခါမှာတောငျသံဃာအစဈကို ရညျမှနျးပွီးတော့လှူဒါနျးပါတယျဆိုရငျ အဲဒီဒါနကုသိုလျဟာအတိုငျးအဆမဲ့အကြိုးရနိုငျတယျလို့ ဒီလိုဟာထားတာ ‘ဒက်ခိဏဝိဘင်ျဂသုတျ’မှာ..အဲ့တော့ ကိုယျ့စိတျက အဓိကကတြယျဒါကွောငျ့မို့ အိမျမှာဆှမျးခံကွှလာတယျဆိုရငျ သံဃာပဲသံဃာအနနေဲ့ပဲလှူ ဒါကို တိုကျတှနျးတာသံဃာဆိုတာ ဒီပုဂ်ဂိုလျကိုရညျညှနျးတာမဟုတျဘူး
တဈသာသနာလုံးမှာရှိတဲ့သံဃာတှကေို ရညျညှနျးလိုကျတာအဖှဲ့အစညျးတဈခုလုံးကို ရညျညှနျးတာနျော..အဲ့ဒီလို သံဃာဆိုတဲ့အမှတျနဲ့ ရညျစူးပွီးတော့လှူလိုကျမယျဆိုရငျ စိတျထဲမှာ ကွညျညိုလိမျ့မယျလှူတဲ့ဆှမျးဟာ ရှငျသာရိပုတ်တရာတို့အထိ ဘုရားလကျထကျက အရိယာသံဃာတှအေထိ ရောကျသှားတယျ..ဒီကိုယျတျောက ကိုယျစားလှယျ သံဃာ့ကိုယျစားလှယျလို့ စိတျထဲမှာထား..နျောသံဃာ့ကိုယျစားလှယျအနနေဲ့လှူလိုကျရငျ အဲဒါကို အာရုံပွုလိုကျရတဲ့အခါမှာစိတျတှကွေညျနူးလာမယျ အဲဒီလိုကွညျနူးတဲ့စိတျနဲ့ သဆေုံးသှားရမယျဆိုလို့ရှိရငျကောငျးရာသုဂတိဘုံကိုရောကျနိုငျပါတယျလို့ မွတျစှာဘုရားက ဟောတာနျော..ဒါက ဒါနနဲ့ပတျသကျတဲ့ မွတျစှာဘုရားရှငျကိုယျတျောမွတျရဲ့ မိနျ့မှာခကျြပဲဖွဈတယျနျော..လှူဒါနျးရတဲ့အခြိနျကာလမှာ မိမိတို့ရဲ့စိတျစတေနာဟာမှနျကနျတဲ့လမျးကွောငျးပျေါရောကျဖို့အတှကျ မွတျစှာဘုရားရှငျကိုယျတျောမွတျသညျအကြိုးစီးပှားမြားပွားစဖေို့အတှကျ အခုလိုဒါနနဲ့ပတျသကျတဲ့စကားကို မိနျ့ကွားတာပဲဖွဈတယျ..ပါခြုပျဆရာတျောကွီး
တရားတျောအသံဖိုငျမှ ကောကျနုတျပူဇျောထားခွငျးဖွဈ၍စာလုံးသတျပုံမှားယှငျးပါက သညျးခံခှငျ့လှတျပေးကွပါရနျ🙏စတေနာမတ်ေတာအရငျးခံဖွငျ့💜
ဒီကိစ္စကို မီးရထားဝန်ကြီး စစ်ဆေးအရေးယူပေးပါ မြန်မာ့မီးရထား ဝင်ငွေ နှစ်စဉ်ဆုံးရှုံးနေတဲ့ အဓိကတရားခံပါပဲ
ဒီကနေ့ ကျင်းပတဲ့ အကယ်ဒမီ ပိုင်ဖြိုးသု ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲကို တက်ရောက်လာကြတဲ့...
ထီးနန်းရဖို့ ခမည်းတော်နဲ့နောင်တော်ကိုသတ်အရက် စက်ဆုံး ဘုရင်ရယ်လို့...